Bonke abazali bayazi ukuthi kulula ukubeka izinto zezingane - lokhu kuyinkinga njalo. Ngifuna igumbi libe lihle futhi lihle, futhi ngesikhathi esifanayo ingane kufanele ithole kalula amathoyizi nezintandokazi zakhe. Okuhle kakhulu kule ndaba kukhona amashalofu ekamelweni labantwana. Akuzona nje kuphela ezisebenzayo, kodwa futhi zinokukhetha okuningi okuklama, ngakho-ke ungakhetha umbala ofanele wangaphakathi wakho.
Ungakhetha kanjani i-rack efanele izingane?
Imfuneko esemqoka yefenisha yezingane ukuphepha kwayo. Kubaluleke kakhulu ukuba unake ulwazi oluvela kuso ishalofu. Okungcono, ukuthi kwakungumuthi wemvelo, kodwa manje kukhona izinto eziningi zanamuhla eziphephile futhi azikhipha izinto ezilimazayo. Kulula ukuhlanza, ube nemibala egqamile futhi imelana nomonakalo. Kodwa lokhu kubaluleke kakhulu ifenisha yezingane.
Bheka ukuthi i-rack igxilile, kungcono uma itholakala odongeni ukuze ingane ingayishintshi. Uma inesibambo, kufanele ibe ngaphakathi, futhi izingxenye ezihamba phambili namagumbane zihlangene. Gwema ukufaka izingilazi nezingxenye zensimbi.
Isimiso sesibili abazali abakhetha ngaso ukukhishwa kwengane ngamathoyizi ukusebenza kwayo. Akufanele ahlale isikhala esiningi ekamelweni futhi kuhle uma ifenisha enjalo izobamba zonke izinto zokudlala kanye nezingubo zomntwana. Ukuze wenze lokhu, umkhonyovu ungaba namashalofu noma amakhadi lapho kuvalwa khona izinto ezincane. Uma igumbi lincane futhi ufuna ukwenza indawo yamageyimu, uzodinga ishalofu elisekhoneni. Akuthathi isikhala esiningi, kodwa kukhululekile.
Amashalofu wezingane kufanele athandwe ngumntwana. Hhayi, uma lizohlangana ngokomzimba ngaphakathi kwekamelo bese idonsela ingane enemibala emihle noma isimo sokuqala. Izinhlobonhlobo ezihlukahlukene kakhulu zokulondolozwa okuvulekile emakhaya. Kungaba ngesimo sendlu, umkhumbi noma isikebhe.
Amagundane anganciphisa noma ahlale kulo lonke udonga, enezigaba ezifanayo noma ezihlukile, ezinezakhi noma iminyango. Iheferensi yezingane kufanele ivuleke, ukuze izinyane likwazi ukubona ukuthi yiziphi izincwadi ezikhona. Yebo, uma bekanye namathoyizi, kuzosiza ukunaka ingane engathandi ukufunda, ezincwadini. Ngomfundi wesikole, indlela engcono kakhulu ukuthenga ideski labantwana ngeshalofu. Lokhu ngeke nje kwandise isikhala sokusebenza esiwusizo sezincwadi zamabhuku kanye nezinto zokubhala, kodwa futhi kusize ukujwayela ingane ukuba ilandele.
Kuhle kangakanani ukufaka i-tulle?
Ukwakhiwa kwamakamelo okugumbana ngesitayela se-Art Nouveau - izixazululo ezithakazelisayo nezokuqala zesakhiwo samanje
Amakhomitha ekhishi amakhabethe
Amakhethini amnyama namhlophe
Ukwakhiwa kwekamelo lokulala nentombazane
I-flexible floor plinth
I-Chandelier emtholampilo - iyiphi inketho engcono kakhulu kumntanakho?
Ama-wall-papers "ama-roses amhlophe"
Ukubhinca-isihlalo sendawo yokuhlala ehlobo
Ibhokisi lokubeka ngezingcingo zezingilazi
Ikhofi ye-cold - iresiphi
Uphi iVictoria Falls?
Ingubo evulekile emahlombe
Umthandazo wokuphumelela ebhizinisini
Ifenisha yeKhabhinethi enezandla zomuntu siqu
Luhlobo luni lokuhlanza i-humidifier yekhaya kangcono?
IJeans ehlasele 2013
Baby hiccups esiswini
Ngumuphi umugqa ongcono wokuncenga?
Izigqoko zoboya ezinomfashini
Ama-Bootillions epulatifomu - ukuthi yini ongayigqoka nendlela yokudala izithombe ezifashisayo?
Ingabe i-cherry iyasiza?
Ukudla ngemva kokubhapathizwa kwengane
Cutlets kusuka turkey fillet
Ungakhetha kanjani i-tonometer?
Baking kusuka kufulawa rye
Amaqanda amnandi aphuziwe
Thela kusuka ngolimi lwengulube
I-Courgettes ibhakwa inyama enobuthi
Ukudweba kwegolide uKate Moss kuyothunyelwa eSotheby's